हातैमा अट्ने चित्रहरू बनाएर महिनामा लाख कमाउँछन् २२ वर्षीय अमन :: अनुषा अधिकारी :: Setopati
अमन शाक्य र क्यानभासो नेपालका चित्रहरू। तस्बिर सौजन्यः अमन शाक्य
चार वर्षअघिको कुरा हो।
अमन शाक्य जागिरको सिलसिलामा ललितपुर, झम्सिखेलस्थित पेन्टिङ स्टुडियो 'हाउस अफ प्यालेट' पुगे। त्यो बेला उनी १८ वर्षका मात्र थिए।
स्टुडियोमा उनले त्यहाँ भएका पेन्टिङ व्यवस्थापन गर्ने र ग्राहकलाई सेवा दिने काम पाए। काम गर्दै उनले आफ्नो पढाइ अघि बढाइरहे।
पेन्टिङ स्टुडियोमा दुई वर्ष काम गर्दासम्म अमनलाई पनि कलाप्रति लगाव हुन थाल्यो। उनी खाली समयमा चित्र बनाउन सिक्न थाले।
तर चित्र र क्यानभास दुनियाँमा उनलाई एउटा कुरा खट्किन थाल्यो। उनी सबैजसोले ठूला र मध्यम आकारका क्यानभासमा चित्र बनाएको देख्थे। बिक्री हुने पनि तिनै। ग्राहकले रोज्ने पनि त्यही।
उनलाई लाग्यो- यस्तै चित्रकला साना क्यानभासमा बनाउन सकिन्न? एक हातमा अटाउने साना क्यानभास कहाँ पाइएला? यसमा चित्र बनाउँदा कस्तो होला?
यो क्षेत्र र व्यवसायबारे अझ बुझ्न मन लाग्यो उनलाई। इन्टरनेटमा खोज्न थाले। यो क्रममा पत्ता लाए- नेपाली बजारमा पेन्टिङ गर्न मिल्ने साना (मिनी) क्यानभास हत्तपत्त भेटिँदैन।
'अरूले ठूला क्यानभासमा ठूला पेन्टिङ बनाएर बेचेको देख्थेँ। मलाई भने यसमै केही फरक गर्न मन थियो,' अमनले भने, 'मिनी क्यानभास नेपालमा नपाइने थाहा पाएपछि यसलाई उत्पादन गर्न लगाएर पेन्टिङ गर्दै बेच्ने सोच आयो।'
मिनी क्यानभास बनाउने त सोचे, तर कहाँ-कसरी बनाउने उनलाई भेउ थिएन। उनी कयौं काठ कारखाना पुगे। तर उनको काम गर्न कसैले चासो देखाएनन्।
यहाँ कसैले बनाइदिने सुरसार नदेखाएपछि उनले विदेशी बजार चहारे। अन्तिममा चीनबाट मिनी क्यानभास मगाए।
हातमा अटाउने, जम्मा तीन इन्च लम्बाइ र तीन इन्च चौडाइ भएका ती क्यानभासमा अमन आफ्ना कला पोत्न थाले। काम सजिलो थिएन। मिहीन ढंगमा सिक्दै चित्र बनाउन उनलाई निकै मेहनत पर्‍यो।
बिस्तारै उनी मिनी क्यानभास पोत्न पोख्त हुँदै गए। हत्केलामा अट्ने सेतो क्यानभासमा विभिन्न रङ पोतेर बनाइएका चित्र आकर्षक देखियो।
यी चित्र बोकेर अमन विभिन्न चित्रकला व्यापारीकहाँ पुगे। सानो-राम्रो चिज कसलाई मन नपर्ला र! उनका चिटिक्क परेका चित्र बिक्रेताहरूले लिन थाले।
यसपछि अमनमा थप हौसला जाग्यो। आफ्नो कामलाई अझ विस्तार गर्न उनले एक वर्षअघि 'क्यानभासो नेपाल' सञ्चालनमा ल्याए।
क्यानभासोमा दुई शब्दको संयोजन छ- क्यानभास र चर्चित चित्रकार पिकासोको नाम।
'चित्रकला क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेका पिकासोलाई सम्झेर यो नाम राखेको हुँ,' उनले भने।
क्यानभासो सुरू गरेपछि अमनले मिनी क्यानभासमा चित्र बनाउँदै बेचिरहे। उनका साना चित्रकला बजारमा फैलिँदै थिए।
यहीबीचमा एकाएक कोरोना देखा पर्‍यो, लकडाउनले सबै ठप्प भयो।
सुरूका केही महिना अमन पनि अरूझैं घरै बसेर दिन गुजार्न थाले। खाली समयमा आफूसँग भएका मिनी क्यानभासमा आफ्नै अनुहार चित्र (पोर्ट्रेट) बनाए र सामाजिक सञ्जालमा राखे।
उनको त्यो मिनी पोर्ट्रेट धेरैले मन पराए। कतिले आफ्ना लागि पनि बनाइदिन भने।
अनि उनलाई अर्को आइडिया फुर्‍यो– मिनी क्यानभासमा पोर्ट्रेट बनाएर बेच्ने।
हाल पर्यटन विषयमा स्नातक गरिरहेका अमन कलाका विद्यार्थी होइनन्। त्यसैले उनले आफ्नो नयाँ आइडिया सुरू गर्न कलाकै विद्यार्थीलाई काम दिने सोचे। पचास हजार खर्चेर चीनबाट थुप्रै मिनी क्यानभास मगाए। अनि करिब दस जना चित्रकलाका विद्यार्थीलाई कामका लागि बोलाए। आफू भने क्यानभासोको बजार विस्तारमा लागे।
सुरूमा उनले यी साना पोर्ट्रेट पेन्टिङ ह्वात्तै बिक्लान् भनेर सोचेका थिएनन्। तर भयो उल्टो। एकाएक उनलाई सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आउन थाल्यो र माग बढ्यो। ग्राहकका फोटो अझ राम्रोसँग बनाउन उनले स्केच र पेन्टिङ आर्टिस्टलाई काममा राखे। फोटोका सबै मिहीन कुरा ध्यानमा राखेर विस्तृत चित्र बनाउने हुँदा एउटा पोर्ट्रेट पेन्टिङ सक्न एक साता लाग्ने अमन बताउँछन्।
यसरी अमनले सुरू गरेको क्यानभासो अहिले मिनी क्यानभासमा हातले बनाएका पोर्ट्रेटकै कारण चर्चित छ। उनीहरू ग्राहकको अर्डरअनुसार फोटो हेरेर मान्छेदेखि कुकुर, बिरालोसम्मको चित्र बनाइदिन्छन्।
'मैले मिनी क्यानभासमै चित्र बनाउनुको अर्को कारण युवा पुस्तालाई लक्षित गर्न हो,' अमन भन्छन्, 'अहिले कसैलाई अर्थपूर्ण उपहार दिनुपर्‍यो भने टन्न पैसा खर्चिनुपर्छ। ठूलो क्यानभासका पेन्टिङको हजारौं रूपैयाँ पर्छ। त्यसैले ठिक्क पैसामा, हेर्दा राम्रो देखिने, जहाँ पनि पठाउने मिल्ने मिनी पेन्टिङ सबैका लागि उपयोगी भएको छ।'
क्यानभासोमा सिंगल पोर्ट्रेट (एक अनुहार) पेन्टिङको आठ सय रूपैयाँ पर्छ। दुई अनुहारको हजार रूपैयाँमा बन्छ। यहाँ पोर्ट्रेटबाहेक अरू पेन्टिङ पनि पाइन्छन्। यी भने सय रूपैयाँमै आउँछन्।
सस्तोमा हातैले बनाएको आफ्नै चित्र पाउने भएपछि ग्राहकहरू पनि क्यानभासोको काममा आर्कषित भएका छन्। अमनले कयौं नेपाली सेलेब्रेटीका पनि मिनी पोर्ट्रेट बनाइदिएका छन्। उनका अनुसार सामान्य दिनमा करिब २५ वटा पोर्ट्रेट अर्डर आउँछ।
'कहिलेकाहीँ अर्डर धेरै आएर धेरै दिनसम्म कुराउनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
उनका चित्र नेपालभर डेलिभर हुन्छ। त्यस्तै यी साना पेन्टिङ उनले थाइल्यान्ड, हङकङ, भारत, अस्ट्रेलिया र कतार पनि पठाइसकेका छन्।
कसैलाई आफ्नो पेन्टिङ मनपरेन भने त्यसलाई फिर्ता गर्न पाउने र पछि फेरि सुधारेर दिने अमन बताउँछन्।
'कुनै बेला अर्डर निकै छोटो सूचनामा आउँछ र चित्रकारले त्यो काम हतारमा सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला व्यक्तिको अनुहार चित्रमा राम्रोसँग उत्रिँदैन,' उनले भने, 'हामी ग्राहकलाई आफ्नो पेन्टिङमार्फत् खुसी देख्न चाहन्छौं। त्यसैले कसैलाई चित्त बुझेन भने उहाँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ।'
अमनको यो काममा परिवारले साथ दिएको छ। आमाबुबाले घरमा पेन्टिङ राख्ने बाकस बनाइदिएका छन्। बहिनीले क्यानभासो नेपालको सामाजिक सञ्जाल सम्हाल्छिन्।
'मैले आफ्नै व्यवसाय सुरू गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ,' उनी भन्छन्, 'समय मिलेका बेला आमाबुबाले काम गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूको कामको सम्मान गर्दै पैसा पनि दिने गरेको छु।'
अमनले यसरी एक हातमा अट्ने पोर्ट्रेटहरू बेचेर महिनामा एक लाख रूपैयाँ जति नाफा कमाउँछन्। सुरूमा क्यानभासोको आइडिया सुनेर मजाक उडाउनेहरूले अहिले उनको सफलताको प्रशंसा गरिरहेको उनले बताए।
उनको मुख्य ध्यान भने कमाइभन्दा चित्रकला र युवा चित्रकारलाई अघि बढाउनेतिर छ। क्यानभासोअन्तर्गत अहिले आठ जना आर्टिस्टलाई कामको अवसर दिन पाएकोमा नै उनी खुसी छन्।
आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट अमन भन्छन्, 'मैले भविष्यमा भव्यै काम गरेर टन्न पैसा कमाउन सक्छु वा सक्दिनँ थाहा छैन। तर यो उमेरमै आफू काम गर्दै अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकेकामा गर्व गर्छु।'
उनी नेपालमै सम्भावनाका बाटाहरू देख्छन्। विदेश जाने सोच छैन। आफूसँग काम गर्ने युवा आर्टिस्टलाई पनि बाहिर नजान प्रोत्साहन गर्छन्।
'काम गर्न धेरै आइडिया छन्। मैले कुनै अनौठो काम गरेको पनि होइन,' उनी भन्छन्।
उनको आगामी योजना भनेको अब क्यानभासो नेपालको आधिकारिक वेबसाइट र स्टुडियो बनाउने हो। यसलाई विस्तार गर्दै अरू युवा आर्टिस्टलाई काम दिने र धेरै संख्यामा मिनी पोर्ट्रेट बनाउने उनले सोचेका छन्।
(क्यानभासो नेपालको फेसबुक पेजका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्कः ९८०१८००२५४)
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८, ०६:१५:००